Khataraha Khaarijinta (assassination) ee Ikraam Tahliil shaaca ka qaaday (Qormo culus) - Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis.
Warqadaha isburinaya ee Madaxweynaha muddo xileedkiisa dhammaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ku weeraray Ra’iisul Wasaare Maxamed Xussein Roble waxay shaaca ka qaadeen khataro halis ku ah jiritaanka dowladnimada Soomaaliya iyo miisan la’aan hoggaamineed. Farmajo ma cuskanayo qodob dastuur ama sharci ee la xiriira arrinta uu ka hadlayo, ama wuxuu cuskanaya qodob ka saabsan mas’uuliyadda iyo awoodaha Madaxweynaha haseyeeshe aan wax shaqo ah ku laheyn awaamirta u bixinayo.
Warqadaha Farmaajo waxay abuureen jaahwareer iyo walaahow aan nuxur ku fadhin, dadweynaha lagu cabsi gelinayo in guryaha iyo hantida reer Muqdisho la burburinayo haddii aan la aqbalin amarrada qaldan ee Farmaajo. Warqadaha isburrinaya waxay shaaca ka qaadeen in:
6. Farmajo ma aqponsana inay tahay dambi in dowladdu bixiso Diyo. Dowladda waxay bixisa magdhaw, cawlcelin ay maxkamad go’aamiso ama oggolaato kaddib marka la caddeeyo dambiga dhacay iyo cidda mas’uulka ka ah.